Wednesday 24th November 2021 11:50:45 in Wararkii Maanta by Xarunta Dhexe
Masuul Xisbiga WADDANI Ka Tirsan Oo Xukun Lagu Ridey Kadib Markii Uu Eedaymo U Jeedeeyey Madaxwayne Biixi.
Hargeisa(KarinNews)- Guddoomiye ku xigeenka xisbiga Waddani ee gobolka Maroodi-jeex ayaa xukun lagu ridey kadib markii maxkamadda gobolka Maroodi-jeex ay sheegtey in lagu helay in uu eedaymo kulul u jeediyey madaxwayne Muuse Biixi Cabdi.
Maxkamadda gobolka Maroodi-jeex ayaa 2 sanno iyo 2 bilood ku xukuntey Wali Cabdi Jaamac oo ah guddoomiye ku xigeenkii xisbiga WADDANI ee gobolka Maroodi-jeex,kaas oo bilihii udanbeyeey ku xidhnaa Hargeysa. Waxaana maxkamaddu xukunkan u cuskatay in uu eedaymo u jeediyey madaxwaynaha, cadaymaheediina uu keeni waayay.
Madaxda Waddani iyo hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa si wayn u cambaareeyey xukunka Wali Cabdi Jaamac, waxaana ay ku baaqeen in xorriyadiisa loo soo celiyo.
Maaha markii ugu horeysay ee sidan oo kale xukun xabsi loogu rido masuul ama muwaadin eedaymo usoo jeediya madaxwaynaha. Waxanaa u danbeyey xukunkii Halka sanno ahaa ee lagu ridey dhawaan abwaankii Mansoyinka eedaha ah u jeediyey madaxwaynaha.
Xogo KarinNews helayso ayaa xaqiijinaya in ay socdaan dadaalo lagu doonayo in lagu sii dayo Wali Cabdi Jaamac oo ah guddoomiyr ku xigeenkii Waddani ee gobolka Maroodi-jeex.